कोरोना संक्रमित प्रचण्डको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? - ramechhapkhabar.com
कोरोना संक्रमित प्रचण्डको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको छ । गत शुक्रबार बेलुकी पीसीआर परीक्षणबाट उनलाई कोरोना पुष्टि भएको थियो । उनको निजी सचिवालय सदस्य एवं प्रचण्ड पुत्री गंगा दाहालले फेसबुकमार्फत प्रचण्डको स्वास्थ्यमा सुधार आएको जनाएकी छिन् ।
उनले लेखेकी छिन्, ‘बुवाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र अहिले कोभिडको कुनै लक्षण नभएकाले डाक्टरको सल्लाहअनुसार अबको २ दिनमा पीसीआर परीक्षण गर्ने र नेगेटिभ नदेखिएसम्म आइसोलेसनमै बस्नुहनेछ ।’
माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनपछि माओवादीका धेरैजसो नेताहरु संक्रमित भएका छन् । पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा कार्यरत दुई जनाबाहेक सबै संक्रमित भएका थिए ।
माओवादीको आठौं महाधिवेशन कोरोनाको हटस्पट भएको भनी विश्लेषण गरिएको थियो । प्रचण्ड सत्तारुढ गठबन्धनको छलफल गरेपछि संक्रमित भएका थिए ।उक्त बैठकमा सहभागी भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि संक्रमित भएका छन् । उनको स्वास्थ्य पनि सुधारोन्मुख भएको बताइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले १७ दललाई बोलायो
निर्वाचन आयोगमा आज सर्वदलीय बैठक हुने भएको छ । आयोगको अगुवाइमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा उपस्थित १७ दलबीच छलफल हुन लागेको हो । दिउँसो ११ बजेका लागि तय सर्वदलीय बैठकको मुख्य एजेन्डा स्थानीय तह निर्वाचन रहेको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवधि आगामी जेठ ५ मा सकिँदैछ । नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको कार्यअवधि समाप्त भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर वैशाखमा चुनाव मिति तोक्न सुझाव दिएका थिए । देउवाले अन्य दलसँग छलफल गरेर यसबारे निचोड दिने बताए पनि अहिलेसम्म निर्णय लिइसकेका छैनन् ।